သာလွန်ဇောင်းထက်| February 11, 2013 | Hits:16,770
22 | | ရန်ကုန် ကမ်းနားလမ်းရှိ အကောက်ခွန် ဦးစီးဌာန ရုံးချုပ် (ဓာတ်ပုံ – သာလွန်ဇောင်းထက် / ဧရာဝတီ)
13 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website Lulay February 12, 2013 - 2:15 am	Because they already have too much money and their lives have been secured for three generations. It is not called rule of law but encouraging bribery.
Reply	Wut Yee February 12, 2013 - 5:18 am	ညောင်မြစ်တူးရင် ဘာတွေ့ မလဲ
Reply	zaw February 12, 2013 - 9:22 am	whatever small or big, you guys do it. all are same.
Reply	အငြိမ်းစား February 12, 2013 - 10:04 am	ကောင်းတာပေါ့။ ၀န်ထမ်းဘ၀မှာ ရှာဖွေစုဆောင်းထားသမျှတွေကို အလုပ်လုပ်စရာကိုမလိုတော့ပဲ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့စားရုံပဲ…ဟဲဟဲ…..(အဲဒါကိုအငြိမ်းစားလို့ပြောတာထင်ပါ့။)
Reply	ရာဇာ February 12, 2013 - 2:43 pm	အိမ် ရယ် ကားရယ် ပြီးတော့ သိန်းထောင်ချီပြီး ဘဏ်ထဲမှာ ထဲ့ထား….အခုတော့ အငြိမ်းစား …အေးဆေးပါ…ထိုင်စားလို့ ရပြီ…ဘာလိုသေးလဲ အချစ်ရယ်….နောက်လာမဲ့ လူတွေ ဆက်စား…ဆက်လုပ်…ရတာအကုန်ယူ..အကုန်စား…မိရင် အငြိမ်းစား..ဒါဘဲ….ဒါနဲ့..အကောက်ခွန်ပြီးရင် ဘယ်ဋ္ဌာန လဲဟင်? မသိလို့နော်…
Reply	Myochit February 13, 2013 - 12:40 am	သဘောက မတိုင်ရင် ဘာမှမလုပ်ကြဘူးပေါ့လေ။ တိုင်မှပဲနိုင်တဲ့သူကိုအဖြစ်သဘော ဖမ်းပြတဲ့ပုံဖြစ်နေတယ်။
Reply	Moeloneleylone February 13, 2013 - 11:45 am	They are the source of the virus. They are not just HIV but AIDS.
Reply	ml February 13, 2013 - 3:22 am	ဟိုတလောက ငယ်သူငယ်ချင်းတွေ စကားဝိုင်းတခုမှာ မြန်မာပြည် ပြန်လည်တဲ့ သူက ပြောတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက သူငယ်ချင်းတယောက် အခု ဌာနဆိုင်ရာ လူကြီးတွေ အပြောင်းအပြုတ်မှာ သူက ဌာနကြီးတခုကို လက်ထောက်ညွှန်မှုးရာထူးနဲ့ ရောက်သွားသတဲ့။ မကြာခင် မိသားစုထဲမှာ နာမကျန်း ဖြစ်သတဲ့။ အဲသည်ရောဂါက နိုင်ငံခြား သွားကုရင် ပျောက်နိုင်သလို၊ အချို့ မြန်မာပြည်က လူနာ အတော်များများက ပြည်ပ သွား ကုသတဲ့။ အဲသည် အရာရှိလက်သစ်ကတော့ အရင်ကတည်းက ဖြောင့်မှန် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ကင်းလို့ မိဘခြံဝင်းထဲ အိမ်ကလေး ဆောက်နေပြီး စားနိုင်ယုံ ဆိုပါတော့။ (ဒါကြောင့် လာဘ်မစားလို့ အဲသည် ဌာနကြီး ပြောင်းရတယ်လို့လဲ ပြောကြတယ်။ ထားပါတော့။) အဲသည်မှာ မြန်မာပြည် အလည်ပြန်ပြီး ပြန်လာတဲ့ ပြည်ပအခြေစိုက် မိတ်ဆွေက ဘာပြောသလဲ ဆိုတော့ သူတို့ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေက အဲသည် အရာရှိလက်သစ် သူငယ်ချင်းကို ၀ိုင်းတိုက်တွန်း ပြောခဲ့သတဲ့။ လူတိုင်းစားနေတဲ့ နေရာ၊ မင်း ပြုတ်သွားရင် ခံသာအောင် နည်းနည်းပါးပါး စားဦး တဲ့။ မတရား မဟုတ်တောင် အခုပဲ လူမမာကုဘို့ ဆေးဘိုး မရှိဘူး မဟုတ်လား၊ စားထား လို့ ၀ိုင်းတိုက်တွန်းခဲ့ကြသတဲ့။ စကားဝိုင်းထဲ အခြားသူတွေတော့ မသိ၊ ကိုယ်ကတော့ အရမ်း အံ့သြ သွားတယ်။ နောက်ပြီး မတရား မဟုတ်တောင် နည်းနည်းပါးပါး စားထားလို့ တိုက်တွန်းခဲ့တယ် ဆိုတော့ နည်းနည်း လာဘ်ယူတာက အပြစ်ကင်းလို့လား။ ယူခွင့် ရှိလို့လား။ အဲဒါ ပြည်ပမှာ အနှစ် ၂၀ ကျော် နေနေသူက ပြောတာ။ အံ့သြတယ်၊ အတွေးအခေါ် ခံယူချက်တွေကို။
Reply	Shwe Lone February 13, 2013 - 6:51 am	This is good news for corrupt employees. They can suck as much blood as they can, then resign to live peacefully. I heard that the recent retirees are playing golf in Nay Pyi Taw with their stepfathers. Whatalife!
Reply	Win Myint February 13, 2013 - 5:15 pm	တိုင်တဲအခါမှလည်း နိုင်တဲ့သူ၊ ကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေနှင့် လွတ်တဲ့သူကို ဖမ်းပြတဲ့ပုံဖြစ်နေတယ်။
Reply	thantzin February 16, 2013 - 9:48 am	လာဘ်စားလို့ဖြုတ်ထုတ်သတ်တွေလုပ်နေရင် ဌာနနစ်နာမယ်၊ ဌာနနစ်နာရင် နိုင်ငံတော်
Reply	Albert February 17, 2013 - 7:59 am	NOK AIRက မဲဆောက် ၊ ဘန်ကောက် လေကြောင်းခရီ စဉ် ကို တရားဝင် ပါတိစပို့ ကိုင် နဲ့-ထိုင် သွါးသူတွေ ကိုပါ မြ၀တီ က နေ border pass နဲ့ ၀င်သူတွေ ကိုပါ ထိုင်း လ ၀ က၊ ကခွင့်ပြုမယ်ဆို ပိုကောင်းပါမယ်။
Reply	Wut Yee February 18, 2013 - 5:02 am	အကောက်ခွန်ဆိုတာလည်းနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေပါဘဲ။ ကျန်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာလည်း နိုင်ငံဝန်